Nei uchifanira kudzivirira zvakapetwa zvirimo pawebhusaiti yako? | ECommerce nhau
Imwe yemaitiro asinganetsi kune vashandisi veadhijitari ndeyekuti ivo vanopa zvakapetwa zvemukati pane yavo webhusaiti. Migumisiro yacho inogona kuva zvinokuvadza zvakanyanya kune zvaunofarira zvehunyanzvi. Kunyanya kana vachitsamira pamari yavanogona kuburitsa, sezvaunoona pazasi.
Inodaidzwa kuti zvakapetwa zvirimo kana yakadzokororwa mameseji kana ruzivo rukaonekwa mune imwe kana akawanda ma URL. Izvi zvakabatana nechidimbu che Uniform Resource Locator uye ane dudziro chaiyo iri Uniform Resource Locator. Ichi chiito chinogona kunge chiri nekuda kwezvikonzero zvakakura kune vashandisi vega. Kunyangwe kazhinji kazhinji zvichikonzerwa nekuti ivo vanoteedzera zvinyorwa kubva kune mamwe mapeji ewebhu. Asi izvo zvavanogona kunge vasingazive ndezvekuti pakupedzisira zvinotora mutero wayo kumabhizimusi avo edhijitari kana emamwe mablog.
Icho chichava chinopfuura chikonzero chakaringana chekuti iwe udzivise zvakapetwa zvemukati pane webhusaiti yako kubva zvino zvichienda mberi. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti iwe unozotanga kuve nekushanyirwa kushoma semhedzisiro yekumira kwakashata kwavanokupa kubva kune mainjini ekutsvaga enguva. Kwete pasina, kunyangwe iwo ari enjini dzekutsvaga, ivo vanoziva zviri kuitika nguva dzese nezvirimo zvinobuda paInternet munyika dzese. Kusvika padanho rekuti kuita uku kunogona kukutamba imwe nguva yakaipa muhupenyu hwako hwehunyanzvi.
1 Duplicate zvemukati: nei zvichikuvadza zvakanyanya kune zvaunofarira?
2 Mhedzisiro yezviri mukati pamapeji ewebhu
3 Ngwarira shanduro dzeserura
4 Nei kudzivisa zvakapetwa zvemukati kuchikosha?
5 Unogona kudzokorora zvemukati zvinokanganisa SEO?
Duplicate zvemukati: nei zvichikuvadza zvakanyanya kune zvaunofarira?
Aya maitiro mukuvandudza zvemukati pamapeji ewebhu uye mabhizinesi edhijitari ane njodzi zvakanyanya kubva kune yekutengesa maonero. Nekuti zvinogona kutungamira mukudzikira kwekushanya uye huwandu hwevashanyi. Asi chii chakanyanya kutonyanya kusimba: kuremedza kutengesa kwezvigadzirwa, masevhisi kana zvinhu zvinotengeswa kuburikidza nekutengesa zvemagetsi.
Mune injini dzekutsvaga, dzakadai seGoogle, izvi zvirimo zvinowanikwa nyore nyore. Nekukurudzira kwakapetwa kaviri kwatinozokufumura:
Zvekuti zvirimo zvisaite sezvakadzokororwa mukuyedza ku chengetedza zvido zvevashandisi.
Vakatarisana nematambudziko avo kuziva izvo zvirimo chaizvo unofanirwa index.
Tatarisana nemamiriro ezvinhu aya, zviito izvi nemajenareta epawebhu uye vaparidzi mune zvese zviri kurangwa zvakaomarara. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kuribhadhara zvakanyanya zvakanyanya kana iwe uri mutoro wezviitiko izvi zvisingadiwe kune wese munhu.
Mhedzisiro yezviri mukati pamapeji ewebhu
Iwe unozoona kuti zvishoma nezvishoma kudzokororwa kwemukati kunogona kundibata sei. Iwe unoda here kuti uone sei zviito izvi pamapeji ako ewebhu? Tiri kuzokupa iwe mimwe yemhedzisiro inoenderana iyo ichagadzirwa kubva panguva iyoyo.
Kurasikirwa kwekutonga pane webhusaiti. Uye icho chinhu chiri mukati meinjini dzekutsvaga dzeinjini dzekutsvaga dzinokuregeredza iwe nekuda kwekopi yezvimwe zvemukati zvemukati zvinopihwa nemamwe madomeni paInternet.
Kumisikidza zvinobudirira kumisikidza mumajini ekutsvaga. Semhedzisiro yechiito ichi, hapana mubvunzo kuti iwe unenge uine chinzvimbo chisinganyanye kubatsira pane dai iwe waratidza zvepakutanga uye zvemhando yepamusoro zvemukati
Chirango chekubira chakanyanya kuwanda kupfuura vanofunga vazhinji. Nekuyedza kupa mubairo kuyedza kwevanyanzvi vanopa basa remhando yepamusoro neruzivo rwechokwadi chaizvo.
Nekudaro, mamiriro akaomesesa anogona kuitika uye izvo zvinogona kukutungamira iwe kuti uve neanopfuura chikanganiso chimwe mukirasi ino yemaitiro. Inoreva kuti, nekuda kwezvikonzero zvakasiyana, Google inofunga kuti kune mamwe mavhezheni ekutanga uye ako akanyorwa. Izvi zvinowanzoitika mukuyera kwedhijitari uye panowanikwa zvinhu zvinokodzera seinotevera zvatino tarisa zvinoonekwa.
Iwo mazwi akakosha anopiwa kumabasa kana zvemukati.
Kune izvo zvekuvandudza zvaunoita pane zvakamboburitswa zvinyorwa.
Kubva pazuva iro gwaro kana basa rakapihwa.
Kusvika padanho rekusvika padanho iwe paunenge usinganzwisisike kuburitswa kune yekupedzisira platoon mukutsvaga. Nenhevedzano yezvirango zvauchatambura kubva panguva iyoyo pawebhusaiti yebhizinesi rako repamhepo. Iko, zvine musoro, hauzove nemhosva yezviito izvi. Asi pakupera kwezuva iwe uchavaona sekunge ivo vanga vari ivo vane mhosva yekubira uku.
Ngwarira shanduro dzeserura
Kana iwe usiri kuda kupfuura imwe yeaya mamiriro, iwe unofanirwa kuziva kuti ichi chiitiko chinogona kuitika netsaona kana neimwe nzira. Semuenzaniso, kusasiyanisa pakati pezvirimo zvemafoni mbozhanhare uye izvo zvakagadzirirwa pamatafura. Nekuti dzimwe nguva nhare mbozha mapeji ari replica yedesktop vhezheni. Kuti udzivise dambudziko iri risinganakidze pane zvaunofarira, hauzove nesarudzo kunze kwekugadzira zvirimo zvemhando mbiri idzi.
Izvo zvakare zvichave zvinobatsira kwazvo kusarudza inogamuchira dhizaini Izvi mukuita zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuchinjika kune yega tekinoroji chishandiso. Kunyangwe zvese zviri zvako ndezvako sezvo zvinokuvadza zvakanyanya zvinogona kugadzirwa kusimudzira bhizinesi rako, chairo chitoro kana kungori rako pachako kana rekambani blog. Iko zvirimo zvakapetwa zviri pawebhusaiti yako zvinogona kubuda zvisingadiwe uye zvakanyanya, zvisingatarisirwi zvachose. Nekuti pakupera kwezuva Izvo zvinoratidza kuti iwe wakateedzera kana kunyora zvaive mukati mefoni. Izvo zviri nyore uye dambudziko iri rinogona kugadziriswa chete nemusiyano mune ese midhiya.
Nei kudzivisa zvakapetwa zvemukati kuchikosha?
Uku kuita kwaunofanirwa kudzivirira chero zvodii nekuti unogona kubhadhara zvakanyanya kubva ikozvino. Iwe unoda kuziva zvese zvakashata zvinorehwa zvinogona kukura pawebhusaiti yako? Zvakanaka, tora bepa nepenzura kuti unyore pasi nekuti zvinobatsira zvikuru pane imwe nguva muhupenyu hwako.
Zvinokuvadza iwe kudhinda a mhando chisimbiso kune rako rekutengesa mhando.
Iwe haugone kuzivikanwa senge nyanzvi mune ino chikamu. Uye zvakanyanya kushomeka iwe unokosheswa sehunyanzvi pamberi pevechitatu mapato uye makambani mune zvese.
Iwe haugone kusiyanisa iwe kubva kune mamwe madhijitari mapuratifomu uye chokwadi ichi chinoranga zvemukati pamwe nekutengesa kwezvako zvigadzirwa kana masevhisi kana iwe uchiita zvemagetsi zvekutengeserana. Zvishoma zvinhu zvinokuvadza sekusapa izvo zvemukati zvemhando yepamusoro uye dhizaini.
Zvisinei, une mamwe manomano ekuti ubude mune ino maitiro. Kana pane chero mamiriro ezvinhu iwe uchitaura kana kutaura imwe dhatabhesi domeini, zvinokurudzirwa kwazvo kuti iwe isa chinongedzo chinoenda kukero iyoyo. Zvekuti chero panguva ipi injini dzekutsvaga dzifunge kuti iwe wakanyora ruzivo kubva kune iro peji rewebhu.
Ndichiri kune rimwe divi, iwe unogara uine zviwanikwa zvekunyatso chenjera neruzivo iwe rwaunopa mune zvese zvirimo. Usaedze kutaura zvakafanana nemamwe mawebhusaiti. Asi pane zvinopesana, ita zvishoma zvinoshanda kuti uzviwisire kubva pamakwikwi sezvo iri imwe yekiyi yekuwana budiriro mune yedhijitari chikamu. Kunze kweimwe nhevedzano yekufunga kwehunyanzvi uye ichave iri nyaya yemamwe mabasa mune ino yekutaurirana svikiro.
Unogona kudzokorora zvemukati zvinokanganisa SEO?
Ehe saizvozvo, uye munzira dzakawanda. Mune zvese zvinokuvadza zvido zvako semupepeti, zvese zvehunyanzvi uye zvehunyanzvi. Mukati meichi chirevo, iwe unofanirwa kuziva izvo zvinoranga muinjini dzekutsvaga:
Sefa zvirimo zvezvikamu zvakakopwa kuitira kuti usaonekwe mukutsvaga. Semhedzisiro yezviito izvi, kuvepo kwako kucharamba kuchikosha. Nenzvimbo isina kusimba iyo inobvisa vashandisi uye zvakare kutengesa kana iwe uchizvipira iwe kwazviri.
Iwe haumbofi wakanyengedza injini dzekutsvaga kuburikidza nemaitiro aya. Iwe unoda kuziva chikonzero chaicho here? Nekuti ipa algorithms ane simba anoranga ipapo ipapo kune iwo mapeji anounza izvi zvisingadiwe zviito.
Zvinogona kunge zvakadaro nekuti hauna kugadziridza zano re zvemukati zvinongedzo uye zvekunze zvinongedzo. Muchiitiko ichi, iwe unozobuda kunze kwezviitiko zvakamiswa zvakanyanya. Kunyangwe hazvo vachizorangwa uye nekusaonekwa kushoma kuratidza chero mhando yezvigadzirwa, masevhisi kana zvinyorwa.
Duplicate zvemukati zvinogona kutorwa nevamwe vashandisi sechiratidzo chekushaya simba pawebhusaiti yako. Kana chii chakaipisisa, semuenzaniso wekushomeka kwehunyanzvi mudigital chikamu. Kusvika pakuti zvinokanganisa zvese zvaunoita: kutengeswa kwehembe dzemitambo, zvinhu zvevana kana kufambiswa kwezvinyorwa zvine ruzivo.
Iwe unenge waona kuti zvakapetwa zvemukati pane yako webhusaiti hachisi chibvumirano chakanaka kune ako ehunyanzvi mhinduro. Asi pane izvo, mutoro unogona kukutungamira kune anoisa mamiriro ezvinhu zvakanyanya kana kunyangwe kukundikana mubhizinesi rako kana chitoro chaicho. Naizvozvo, iwe zvirinani kudzivirira izvi zviitiko sezvo uine zvishoma zvishoma kuti uwane uye zvakawanda zvekurasa. Usakanganwe kubva ikozvino. Inogona kunge iri kiyi kuitira kuti bhizinesi rako bhizinesi risashande uye kuti uve usina vatengi kana vashandisi vaunoda kukura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Nei uchifanira kudzivirira zvakapetwa zvirimo pawebhusaiti yako?
Kiyi dzenzira yako yekumaka kuti ubudirire